Apple TV-ga cusub wuxuu baabi'inayaa soo saarida maqalka indhaha | Wararka IPhone
Haddii aad horey ugu riyaaqday soo saarida maqalka indhaha ee TV-ga Apple si aad ugu raaxeysatid codka tayo wanaagsan, qalab kasta oo dhawaaq leh oo aad haysato, waxaan kuu haynaa war xun. Aan la fahmi karin Apple waxay go'aansatay inay ka saarto aaladda maqalka indhaha ee TV-ga Apple TV, dabcanna ma laha wax soo saar AUX ah, sidaa darteed ma lahaan doonno wax kale oo aan ka faa'iideysano isku xirnaanta kaliya ee HDMI ee ay ku baahin karto fiidiyow iyo maqal labadaba TV-ga Apple, kaasoo madax-xanuun u keeni doona wax ka badan hal iyo laba.
Faahfaahinta astaamaha Apple TV ee ku saabsan websaydhka Apple waxaan ku soo aragnay warkan aan fiicnayn, haddana hadda beddelka kaliya ee codku waa soosaarka HDMI ee qalabku leeyahay. Wixii maqal ah runti waa war xunIn kasta oo dhammaantood aan lumin, haddana waxay ku xidhi karaan HDMI-ga qalabka iyo qalabka TV-ga inay nuqul ka sameeyaan sawirka, haddii ay na oggolaato, ama in aan ku sii dayno codka iyada oo loo marayo AirPlay haddii aan haysanno mid ka mid ah qalabka codka ee aan kuu oggolaanno. si looga faa’iideysto muuqaalkan.
Dhinaca kale, TV-ga Apple-ka ayaa keena markan qiiq ka baxa Dolby Digital Plus 7.1 iyada oo loo marayo dekeddeeda HDMI 1.4, hagaajinta Dolby Digital 5.1 oo ay bixiso daabacaadii hore ee Apple TV. Tani waa mid ka mid ah sheekooyinka cusub, oo gacanta ugu jira 2 GB ee RAM ee uu dhowaan xaqiijiyay. Si kastaba ha noqotee, wali ma ogin sida Apple u socoto cimilada xaqiiqda ah in TV-ga cusub ee Apple TV uu xaddidayo miisaanka codsiyada 200MB. Caqabadaha yar yar ee aan rajaynayno in Apple ay xal soo saartay ka hor inta aysan u sii deynin iibkiisa. Arrin kale oo aad u muran badan ayaa ah in nooca Siri ee Apple TV laga heli doono oo keliya 8 dal iyo 4 luqadood. Muran ka hor intaan la soo saarin qalabkan yar ee wax badan ballan qaadaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple TV-ga cusub wuxuu tirtirayaa soo saarida maqalka indhaha laakiin wuxuu la yimaadaa Dolby 7.1
Waxay umuuqataa in qofna uusan dareemin, laakiin xaqiiqda ah in Apple TV uu leeyahay kaarka shabakada 10/100 ayaa xadidi doonta inta kufilan, waa wax cajiib ah in uusan gigabit aheyn.
Iyada oo shabakad 10/100 ah macquul maaha in la sii daayo 4gb mkv. Ma garanayo halka ay farta ku fiiqayaan Apple TV-ga cusub laakiin aniga ahaan siyaabo badan ayey ugu yaraayeen.
- 10/100 kaarka shabakadda
- maqnaanshaha USB 3.0 dekedaha si loogu xiro pendrive
- ma jiro wax soo saar maqal oo muuqaal ah oo lagu xiri karo cod-weynaha
- codsi fiidiyow ah oo loogu talagalay suuqa Mareykanka
- Xaddidnaanta cabbirka ciyaarta ee xad-dhaafka ah
- taabashada badhanka jirka, markay ahayd inay karti yeeshaan
- Naqshadeynta wax ka badan kuwii duugga ahaa, kuma bixin dinaar dib u naqshadaynta dibedda
- waxay ahayd inay ka dhigaan mid si buuxda ula jaan qaada ciyaaraha iOS
Sikastaba, waxaan rabaa midkale mana awoodo kuweena sida aadka ah ulaqabsaday tufaaxa qaniinay.
Jawaab Jeronimo Sanchez